Green Growth, Promise Box နှင့် ချစ်လျှင်ပျော်မိ .. အထင်ရှိ ကြကုန်လေသော.. | ဒေါက်တာ မသစ္စာ
March 28, 2013	By ဒေါက်တာ မသစ္စာ	ဂင်ကို ဘိုင်လိုဘာ လို့ အမည်ရတဲ့ အသက်ရှည်ဆေးအပင်များ နဲ့ မေပယ် ပင်များ တန်းစီ စိုက်ပျိုးထားလို့ တောင်ကိုးရီးယား နိုင်ငံ ရဲ့ဆိုးလ် မြို့တော် လေး ဟာ Green Growth ရှိပါ တယ်ရယ် လို့ ကြွေးကြော်ရလောက်အောင် မိုးနှောင်းရာသီရဲ့ ရင်ခွင်အောက် မှာ စိမ်းလန်း ရွှန်းစိုနေပါတယ်..။ တစ်ဆောင်းသစ် ပြန်အုံးတော့မယ် လို့ ငံ့လင့်နေတဲ့ အပင် တစ်ချုို့ တစ်လေ မှာတော့ စိမ်းရောင်စိုလွင် မှုများလျော့ပါး လျက် သိင်္ဂီ တစ်ဝက် ..မြတစ်ဝက် ….။
ဂင်ကို ဘိုင်လိုဘာ Gingko biloba ဆိုတာကလည်း Phyto-remediation ဖြင့် Air pollution ကို လျော့ပါးစေသော ၊ဖန်လုံအ်ိမ်ဓာတ်ငွေ့တွေ GHG (Green House Gas ) နဲ့ လေထု ညစ်ညမ်းမှုကို လျော့ကျစေနိုင် တာမို့ တယ်တော်ပါလား ….ကိုးရီးယား ပေါ့လေ..။ Mr. Ben Kimon ရေ..သင့်မွေးရပ်မြေ အတွက် …Congratulations ပါနော်..။ Waste water Treatment ကို နိုင်နင်း လှတာ မို့ ဟန်မြစ် ရေပြင် ကလည်းကြည်လင်သန့်စင် စွာစီးဆင်း နေတာ …. သဘာဝ ရတနာ တစ်ပါး။ အဲဒီ ဟန်မြစ် ကို ဖြတ်ကူးနိုင်တဲ့ တံတားပေါင်းကလည်း ဆိုးလ် မြို့ထဲမှာတင် ၂၇စင်းရှိနေတာ..။ သပ်ယပ်တောက်ပြောင် နေတဲ့ လမ်း တွေ….ရယ် မိုးထိမြင့်မား တိုက်တာများကတော့ သူတို့ရဲ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု ကို အထင်းသား မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်..။
ကာလကြာရှည်စွာ ရုပ်မြင်သံကြား မကြည့်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်မ ကသာ အထူးအဆန်း ဖြစ်နေပေမဲ့ မြန်မာ တော်တော်များများ က အညာစရော= မင်္ဂလာပါ။ ကင်ဆာ မီဒါ= ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ အိုးပါး= အစ်ကို ၊ အိုညိ= အမ၊ အိုမ= အမေ။ အာဘူးကြီး= အဖေ စသည်ဖြင့် ခေါ်ဝေါ်ကြကာ …. တော်ပုကီ..ကင်ချီ..ဆန်မုန့် စတဲ့အစားအသောက်တွေ ကိုပါ စိမ့်ဝင်ရင်းနှီးနေတာယဉ်ကျေးမှုချင်းရောနှော ခဲ့ပါပြီ.။ အမျိုးသမီးတော်တော်များများ ကတော့ ပိန်ပိန်ပါးပါး သန့်သန့် ခန့်ခန့် တွေ များပါတယ်..။ ရိုးသားဖြောင့်စင်း ပြီး အကြောသိပ် မတင်း တဲ့ မျက်နှာများစွာ ကိုလည်း တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်..။
ကိုးရီးယားမှာကတော့ မြစ်နဲ့ ဝေးတာကလည်းတစ်ကြောင်း၊ တောင်ပေါ်ဖြစ်နေတာမို့ သော့ ပစ်ထည့် တဲ့ ပုံး ကို အနီရောင် ရှိသော Promise Box အဖြစ် စုစည်းတည်ရှိစေပါတယ်..။ ဤ သေတ္တာ နှင့် ဤ နေရာသည် သစ္စာတရားများ စုဝေးရာဖြစ်စေသတည်း ပေါ့လေ..။
← ပိုမိုစိမ်းလန်းသော မြို့ပြ အိမ်ယာများ ထူထောင် ခြင်း (သို့) အိမ်သုံးဟင်းခင်းစိုက်ပျိုးခြင်း	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...